မတ်လ ၂၀၂၁ တွင်ကြိုးစားကြည့်ပါ - ဖက်ရှင်
သတင်း လိင်ကိုချစ်တယ် ကြည့်ရမယ် စိတ်ကျန်းမာရေး အလေးချိန်ဆုံးရှုံးမှု အောင်မြင်သူ သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု ပြည်တွင်း ချက်ပြုတ်နည်းများ Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ်
၃၁ နှစ်မတ်လတွင်စတင်မည့်ဤအကြံအစည် (Puffer Coat ပါဝင်သည်မဟုတ်ပါ)
နွေ ဦး သည်လေထဲ၌ (နီးပါး) ရှိသည် ဖြစ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်တောက်ပသောအရောင်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏လေးလံသောသိုးမွှေးအင်္ကျီများကိုစတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီ။ ပန်းပုံ နှင့်မဟုတျကွောငျးမဆိုဆက်စပ်ပစ္စည်း beanie ဦး ထုပ် သို့မဟုတ်ဖှဲ့တရံ။ ဤလတွင်နေ့စဉ်နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းကြိုးစားရန်အတွက် chic မတ်မတ်စိတ်ကူး ၃၁ ခုကိုဤတွင်တွေ့နိုင်သည်။ (hallelujah!)
သက်ဆိုင်သော: ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းအားခေါ်ဆိုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ၂၀၂၁ တွင် Nap Dress နှင့် Nightgown များသည်ချွေးထွက်များဖြစ်သည်
သငျသညျရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအဆုံးသတ်ဘယ်တော့မှစေခြင်းငှါစတင်စိုးရိမ်လျှင်, က OK ကိုသင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ သို့သော်စူပါတောက်ပသောစောင်ပဝါဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုရစ်ပတ်ထားခြင်းသည်သင်၏ ensemble အားအနည်းဆုံးနွေ ဦး ရာသီကဲ့သို့ခံစားရစေပြီးသင်ဖြတ်သန်းသွားသူအားလုံး၏မျက်နှာကိုပြုံးလိမ့်မည်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Ezcaray ပဝါ (ဒေါ်လာ ၁၀၀)၊ Apparis ကုတ်အင်္ကျီ ($ 675;$ 338); STS အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၃၉)၊ Fendi အိတ် ($ 2,100); ဂျက်ဖရီကမ့်ဘဲလ်ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၆၅)
အထူးသဖြင့်နွေ ဦး ရာသီမှာတုတ်ကျင်းတွေဘယ်တော့မှကုန်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသင်ဂန္ Khaki ဗားရှင်းထက်ကျော်လွန်စဉ်းစားအချိန်ကိုဖွင့်လို့ထင်ပါတယ်။ ဤအချိန်တွင်၎င်းသည်တောက်ပသောအရောင်များ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သောအထည်များနှင့်ပုံနှိပ်စက်များဖြစ်သည်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ခရမ်းရောင် Romance တုတ်ကျင်းကုတ်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၁၁၇;$ 83); ခေါင်းလောင်း ($ ၄၁၉)၊ A.P.C. အိတ် ($ ၅၂၅)၊ ရတနာ & ဘွန်းဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၉၀;ဒေါ်လာ ၅၄)
၃။ လုံး ၀ လက်လွတ်ပါ
သင်၏ခါးပတ်ပတ်လည်တွင်ခါးပတ်ထက်သင့်ခန္ဓာကိုယ်တစ်လျှောက် ၀ တ်ဆင်ထားသောပြိုင်ကားဆန်သောအထည်နှင့်သင့်ဂန္ထဝင်သိုးမွှေးရသောဆောင်းတွင်းကုတ်အင်္ကျီအချို့ကိုအနားပေးပါ
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Bandier ရှိပါတယ် (ဒေါ်လာ ၁၄၅;$ 109); ကလပ်မိုနာကိုကုတ်အင်္ကျီ ($ ၄၇၉)၊ အဖြူ + Warren ဆွယ်တာ ($ 288;$ 225); Callahan ဘောင်းဘီ Revolve x (ဒေါ်လာ ၈၈)၊ အခမဲ့ပြည်သူ့ Fanny ဗူး (ဒေါ်လာ ၇၈)၊ အနောက်ကိုးဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၁၉)
အက်ဒွပ် Berthelot / Getty Images
၄။ All-Black Ensemble ကို Super-Bright Hues နှင့်ဟန်ချက်ညီညီထားပါ
တစ်ခါတစ်ရံခေါင်းကိုက်ခြင်းမှအနက်ရောင်အားကစားသည်နံနက်ယံ၌ဝတ်ဆင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ သို့သော်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောအရောင်တစ်မျိုး (သို့) နှစ်ခုသာပြောင်းလဲခြင်းသည်ပန်းရောင်၊ လျှပ်စစ်အပြာရောင်သို့မဟုတ်ချယ်ရီနီတို့ကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအဝတ်အစားကိုအမှန်တကယ်အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောအသွင်ပြောင်းစေနိုင်သည်။ ထိုအရာသည်သင်၏မျက်နှာကိုအခါတိုင်းပြုံးနိုင်လိမ့်မည်။ သင်သည်သင်၏ရောင်ပြန်ဟပ်မှု၏တစေ့တစောင်းဖမ်း။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ချစ်သူများ + သူငယ်ချင်းများဂျာကင်အင်္ကျီ ($ 218;$ 55); Lululemon တီရှပ် (ဒေါ်လာ ၅၈)၊ ရေဗက္ကာတေလာဘောင်းဘီ ($ 395;$ 158); Puma ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၄၀)
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ဟောငျးရေတပ်ဆွယ်တာအင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၄၅;$ 35); Chloéခါးပတ်အိတ် ($ 628); လယ်ယာရီယိုစကတ် ($ 158); ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ Blank ဘွတ်ဖိနပ် ($ 239;ဒေါ်လာ ၉၆)
@ natalialevsina / Instagram
၆။ Elevated Sweatsuit ကိုစမ်းကြည့်ပါ။
coterie အဖွဲ့ဝင် Natalia Levsina 's အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ခရမ်းရောင်ချွေး -set ကို (ခေတ်မှီတိုက်ခိုက်ရေးဘွတ်ဖိနပ်နှင့်ရှည်လျားသော shacket နှင့်အတူအထူးသဖြင့်အခါ), မယ့် chic မဟုတ်ပါဘူး, ဒါကြောင့်လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဖော်ရွေပါတယ်။ တစ် ဦး Win-Win အကြောင်းပြောဆိုပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Pangaia ချွေးထွက် ($ 150) နှင့် ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၁၂၀)၊ အဆိုပါ Shacket အကယ်ဒမီ ($ 238); Marc Fisher, LTD ဘွတ်ဖိနပ် ($ 239;ဒေါ်လာ ၁၄၄)
zebra-print ဘောင်းဘီကဲ့သို့စူပါရဲရင့်သောအရာတစ်ခုခုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်လှည့်ကွက်သည်သင်၏ဝတ်စုံများကိုရိုးရှင်းပြီးအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်သွားမယ့်တုတ်ကျင်း၊ လောလောလတ်လတ်သန့်ရှင်း အဖြူရောင်ဘွတ်ဖိနပ်နှင့်က whirl ပေးပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: M.M.Lafleur ကုတ်အင်္ကျီ ($ 395); L.L.Bean တီရှပ် (ဒေါ်လာ ၂၃)၊ Nike ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၆၅)၊ 42 ရွှေဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၆၀)
အဝါရောင်ကန်ခြင်း (သို့) လွယ်အိတ်လေးတစ်ခု (အထူးသဖြင့်သင့်အဝတ်အစားများထဲမှမီးခိုးရောင်ပမာဏ) ကဲ့သို့သောဆောင်းရာသီအလွန်ဆိုးရွားသည့်နောက်ဆုံးကာလများအတွင်းသင့်စိတ်ဓာတ်ကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်သောအရာမရှိပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Bernardo ကုတ်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၂၇၀;$ 160); လိုင်း & Dot လိပ် (ဒေါ်လာ ၉၀;$ 63); Topshop ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၄၅)၊ Kate Spade နယူးယောက်အိတ် ($ 188;$ 132); Enimay အိတ်ကျက်သရေ (ဒေါ်လာ ၉)၊ Cariuma စနီနာ (ဒေါ်လာ ၇၉)
Headbands များသည်လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်၏အကြီးမားဆုံးသောလမ်းကြောင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဖောင်းပွမှုသည်အတော်အတန်နိမ့်ကျသွားသော်လည်း preppy ဆံပင်အသုံးအဆောင်သည် Zoom ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများသို့မဟုတ်ကုန်စုံဆိုင်များသို့လည်ပတ်ခြင်းအတွက်သင့်ကိုပိုမိုကြည့်ရှုခံစားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Lele Sadoughi ခေါင်းကိုက် (ဒေါ်လာ ၁၅၀)၊ က Les Filles တုတ်ကျင်းကုတ်အင်္ကျီနှင့်အတူ ($ 220;$ 100); M.M.Lafleur ခါးပတ် (ဒေါ်လာ ၁၁၀)
ဒါ့အပြင်မုတ်ဆိတ်မွေးတဲ့အင်္ကျီတစ်ထည်ဒါမှမဟုတ်နွေးထွေးတဲ့အင်္ကျီလိုစမ်းကြည့်ပါ။ (Psst, ဂန္ထဝင်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများသည်အမြဲတမ်းရှုပ်ထွေးနေလိမ့်မည်။ သို့သော်သင့်လက်ကိုင်အိတ်သို့မဟုတ် beanie ဦး ထုပ်မှတစ်ဆင့်နောက်ထပ်ပုံစံအချို့ကိုရောစပ်ရန်စိတ်ကူးကိုကျွန်ုပ်တို့နှစ်သက်သည်။ )
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: White + Warren ဦး ထုပ် (ဒေါ်လာ ၁၀၀)၊ Roxy ကုတ်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၃၀၀)၊ Madewell အိတ် ($ 178); မိခင်ဂျင်းဘောင်းဘီ ($ ၂၆၈)၊ စတိဗ် Madden ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၀၀;ဒေါ်လာ ၆၀)
သင့်ရဲ့အင်္ကျီနှင့်အတူလာသောကိုက်ညီသောခါးပတ်ကပ်မထားပါနဲ့။ ယင်းအစား၊ ဆန့်ကျင်သောအရောင်ဖြင့်ရှည်လျားသောသားရေဗားရှင်းအတွက်၎င်းကိုပြောင်းပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Sanctuary ကုတ်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၂၇၀;$ 189); Raina ခါးပတ် (ဒေါ်လာ ၁၂၀)၊ Lente အိတ်အက ($ 387); Marc Fisher, LTD ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၈၉)
Donnell Woodson / Getty Images
12. Pair Colorful Plaid နှင့်အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်တို့ပါ ၀ င်သည်
၎င်းသည်တစ်ချိန်တည်းတွင်အလွန်များများဖြစ်သင့်သည်ဟုခံစားရသည်။ သို့သော်အပြာရောင်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်အနက်ရောင် hightop စနီကာများကဲ့သို့ဝတ်ဆင်ထားသည့်အခါအရောင်အသွေးစုံလင်သော plaid သည်သင့် ensemble သို့ပျော်စရာနှင့်ပျော်စရာအဆင့်ကိုသာသယ်ဆောင်ပေးသည်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Balenciaga ပဝါ ($ ၅၂၅)၊ ကုတ်အင်္ကျီ ($ 385); L.L.Bean ဂျင်းဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၈၉)၊ စကားစမြည်ပြော (ဒေါ်လာ ၅၅)
သာလွန်ကောင်းမွန်သောပဝါတစ်ချောင်းသည်သင့်အားပုံမှန်ဂျာကင်အင်္ကျီကဲ့သို့နွေးထွေး။ နွေးထွေးမှုရှိစေရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဒါကြောင့်ဘာလို့အဲဒါကိုတစ်ခုလိုမျိုးဆက်ဆံမလဲ။ သင်၏ပဝါကိုသင်၏ပခုံးပေါ်၌ တင်၍ အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိရန်သင်၏ခါးပတ်ပတ်လည်၌ချည်ထားပါ။ (Pro tip: သင်၏နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအ ၀ တ်အစားများကိုနွေးထွေးမှုအတွက်သားရေဘောင်းဘီတစ်ထည်နှင့် ၀ တ်ဆင်ပါ။ )
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Wolf & Badger ပဝါ (ဒေါ်လာ ၈၂)၊ မိုက်ကယ် Lauren turtleneck ($ 97;$ 68); Wilfred ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၁၄၈)၊ Bandolino ဒေါက် (ဒေါ်လာ ၆၉;ဒေါ်လာ ၃၅)
ညနေခင်းအဆင်သင့်လက်ကိုင်အိတ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဗီရိုထဲတွင်လပေါင်းများစွာစုဆောင်းနေခဲ့ကြသော်လည်းသင်ကော့တေးပါတီနေ့၊ ညဥ့်အခါသို့မဟုတ်မင်္ဂလာဆောင် reception ည့်ခံပွဲအတွက်သူတို့ကိုသိမ်းဆည်းရန်လိုအပ်သည်ဟူသောစည်းမျဉ်းမရှိပါ။ ထိုအလှအပများကိုသိုလှောင်ထားရာမှထုတ်ယူကာအထူးကော်ဖီတစ်ခွက်ကဲ့သို့ခံစားရစေရန်သင်၏နောက်ကော်ဖီတစ်ခွက်တွင်တစ်လုံးကိုထည့်ပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Bottega Veneta clutch ($ 1,750); Rag & အရိုး blazer ($ 495;$ 160); Eileen Fisher က turtleneck ($ 248;ဒေါ်လာ ၁၄၉)
15. Texture နှင့်အတူကုတ်အင်္ကျီကိုရွေးချယ်ပါ
ဒီတစ်ခါလည်း plaid, အစင်းသို့မဟုတ်အရောင်ပိတ်ဆို့ခြင်းရုံသင်၏အရာမဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစိုင်အခဲပါသည့်သိုးမွှေး Peakats စီးရီးများသို့နှုတ်ထွက်မည့်အစား Croc-intalated faux-leather ကဲ့သို့ ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည့်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့်တစ်ခုခုကိုစမ်းကြည့်ပါ။ ၎င်းသည်အသေးစိတ်ပုံစံနှင့်အတူတူ wow factor ရှိသော်လည်းသင်၏လက်ရှိဗီရိုနှင့်ရောနှောရန်နှင့်ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ဖြစ်သည်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ALO turtleneck ($ 88;$ 70); MM6 Maison Margiela ကုတ်အင်္ကျီ ($ 1,360;$ 952); Cuyana clutch (ဒေါ်လာ ၁၇၅)၊ Nordstrom လက်အိတ် ($ 99;$ 60); SLVRLAKE ဂျင်းဘောင်းဘီ ($ 392); Marc Fisher, LTD ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၉၀;ဒေါ်လာ ၉၀)
တံခါးရှေ့သို့ ဦး တည်သည့်သင်၏အဓိကရည်မှန်းချက်မှာနွေးထွေး။ သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် beanie၊ Bernie ပုံစံ mittens နှင့် lug-sole boots များဖြစ်သည်။ သို့သော်၎င်းတွင်သင်သည်ရူပ၊ whimsy တစ်ခုဆက်ပြောသည်ထိတွေ့များအတွက် glam ကွင်းဆက်ခါးပတ်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Sane Diego Hat ကုမ္ပဏီ ဦး ထုပ် (ဒေါ်လာ ၂၁)၊ ကျွန်ုပ်၏ကျွန်ုပ်၏နေကာမျက်မှန် (ဒေါ်လာ ၇၈;$ 25); Gorjana လည်ဆွဲအစုံ (ဒေါ်လာ ၁၀၈)၊ Nasty Gal အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၁၂၀;$ 47); ခါးပတ်ခါးပတ် B- အနိမျ့ ($ 172); One Knits mittens (ဒေါ်လာ ၇၀)၊ Cuyana အိတ် (ဒေါ်လာ ၉၅)၊ စတိဗ် Madden ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၅၀;ဒေါ်လာ ၉၀)
နွေ ဦး ရာသီဥတုမရှိဘဲပင်ယခုရာသီ၏အကြီးမားဆုံးထိခိုက်မှုကို ဦး ခေါင်းမှခြေချောင်းအထိထိမှန်စေပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ငှက်ပျောသီးသမ္မတနိုင်ငံစက်ရုံအင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၁၈၀;$ 93); ALC blazer ($ 695;$ 278) နှင့် ဘောင်းဘီ ($ 395;$ 237); အဝတ်အချည်းစည်းဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၂၅၉)
၁၈။ မမျှော်လင့်သော Color Combos ဖြင့်ကစားပါ
Marigold အဝါရောင်၊ ရေတပ်အပြာနှင့်မင်းမောင်းခရမ်းရောင်တို့အတူတကွကောင်းမွန်စွာကြည့်ရှုနိုင်မည်ကိုမည်သူသိသနည်း။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: အင်္ဂလိပ်စက်ရုံဆွယ်တာအင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၇၀)၊ ခြင်္သေ့အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၇၂)၊ မာ့ခ် Jacobs အိတ် ($ 295); ရှင်ပေါလုအင်ဒရူးဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၈၉၅)
70 ကြိုးတွေ '' 19. MIX '70s GLAM'
plaid shacket (ရှပ်အင်္ကျီ + ဂျာကင်အင်္ကျီ) နှင့် bootcut corduroy ကို ၀ တ်ဆင်ထားခြင်းသည် Donna ထံမှဝတ်စားဆင်ယင်ပုံကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်သည် ဒါက '70 ပြရန် (နှင့်နည်းနည်း dowdy- မပြစ်မှု, Donna) ။ သို့သော်တောက်ပသောရွှေရောင်ကွင်းငယ်များနှင့်ပြည့်စုံကောင်းမွန်သောသွင်ပြင်လက္ခဏာကိုထည့်ပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Luv Aj ပုတီး (ဒေါ်လာ ၅၅)၊ BB ဒါကိုတာခြေစွပ် (ဒေါ်လာ ၁၄၅)၊ Ganni ဘောင်းဘီ ($ 225;$ 112); BP ။ ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၉၀;ဒေါ်လာ ၃၆)
20. Funky ဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အတူမိုးရွာစေသောနေ့ကိုလင်းစေပါ
သင်၏ပျင်းစရာကောင်းသည့်အနက်ရောင်မိုးကာအင်္ကျီကိုရဲရင့်သောအနီရောင်ဗားရှင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ရှင်းလင်းစွာအရောင်တောက်ခြင်းအတွက်သင်၏ယေဘုယျအနက်ရောင်ထီးကိုလဲလှယ်ပါ။ ယခုဤမျှလောက် dreary မဟုတ်လော
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Kate Spade နယူးယောက်ထီး (ဒေါ်လာ ၃၉)၊ ကနေဒါ Goose မိုးရွာရွာဂျာကင်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၇၅၀)၊ Adidas ဂျာကင်အင်္ကျီ ($) နှင့် ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၇၀)၊ အမ်သင်္ဘော loafers (ဒေါ်လာ ၂၄၈)
မSဲ Sperzel / Getty Images
သင်တစ် ဦး ဂန္ chambray ခလုတ်ကို -up, လိုပဲအပေါငျးတို့သအထိတက် Button နှင့်သင့်ခါးသို့ tuck ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: အမေရိကန်လင်းယုန် Outfitters ဂျာကင်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၆၀;$ 42); Veronica မုတ်ဆိတ်ဘောင်းဘီ ($ 348;$ 209); Tory Burch တိုက်ခန်းများ (ဒေါ်လာ ၂၄၈)
22. Stirrup Leggings ကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုပေးပါ
သငျသညျအားလုံးဆောင်းရာသီအတွက် leggings နထေိုငျခဲ့ရင်တောင်ဒီရိုးရှင်းတဲ့စတိုင်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်ကိုအဓိကခြားနားချက်စေနိုင်သည်။ ဒီအပိုပစ္စည်းနည်းနည်းကသင့်ကိုတစ်မိုင်ရှည်တဲ့ခြေထောက်တွေကိုပေးဖို့သင့်ရဲ့ပင်စည်ကိုပိုရှည်စေတယ်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: H & M ဆွယ်တာအင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၄၀)၊ C လှုပ်ရှားမှု leggings ၏အပူပိုင်းဒေသ (ဒေါ်လာ ၁၂၈)၊ JW Pei အိတ် (ဒေါ်လာ ၇၉;$ 49); အမေရိကန်ဒေါက်ဖိနပ်ကောင်း (ဒေါ်လာ ၁၆၉)
သက်ဆိုင်သော: ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်ကြိုးစားကြည့်ရှုရန် Leggings အသစ် ၇ ခု (နှင့်အငြိမ်းစားယူရန် ၁ ခု)
ဒီတစ်ချက်တည်းသောအ ၀ တ်အစားသည်ကျွန်ုပ်တို့အကြိုက်ဆုံးချွေးများထက် ပို၍ အဆင်ပြေနိုင်သည်။ သင်၏ခါးကိုခါးပတ်ဖြင့်ချည်ပြီးချို့တဲ့သောဂီယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ရန်သင်၏လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်ဟုခံစားရခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အချို့သော glitzy လက်ဝတ်ရတနာများကိုထည့်ပါ။ အချို့သောစိတ် ၀ င်စားမှုများအတွက်လည်းရောင်စုံသို့မဟုတ်ပုံစံငယ်သောလိပ်ပြာကိုအောက်ရှိကစားခြင်းနှင့်တွဲဖက်ကစားပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: L.F.Markey boilersuit ($ ၂၁၈)၊ J.Crew turtleneck (ဒေါ်လာ ၃၇;$ 28); ဗင်နီနာ (ဒေါ်လာ ၆၀)
သင်ကသင်၏курткаနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်ခါးပတ်ကိုလဲလှယ်ရန်ကြိုးစားပြီးပြီ ဖြစ်၍ ကျန်သည့်ပစ္စည်းကိုဘာလုပ်ရမည်နည်း။ ၎င်းကိုဝတ်စုံအကျီင်္သို့မဟုတ် ၀ တ်ဆင်ထားသည့်နေရာတွင်ကြိုးနှင့်ချည်။ ၎င်းကိုသူ့ဘာသာသူပေးပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: London Fog တုတ်ကျင်းကုတ်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၂၅၀;$ 200); Babaton blazer ($ 198) နှင့် ဘောင်းဘီ ($ 168;ဒေါ်လာ ၅၀)၊ Staud clutch (ဒေါ်လာ ၁၉၅)၊ ဂျင်မီချူးဒေါက် (ဒေါ်လာ ၆၅၀)
@ katiesturino / Instagram
ဟုတ်ပါတယ်, ဒီချစ်ရာသခင် '' 80s စတိုင်ပြန်နွေ ဦး အဘို့ဖြစ်၏, ဒါပေမယ့်နီယွန် -hued Off-the- ပခုံးထိပ်နှင့်အတူထက်န်းကျင်ဤအချိန်ဝတ်ဆင်ရန်ပိုကောင်းတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ Coterie အဖွဲ့ဝင် Katie Sturino ထံမှလှုံ့ဆော်မှုကိုယူပြီး ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင်သင်၏အဝတ်အစားကိုခိုင်မြဲစေရန်အဖြူရောင် tee နှင့် beige flat များအပါအဝင်ကြားနေအသံထွက်များကဲ့သို့သောချွန်ထက်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံအပိုင်းအစများနှင့်သင့်ကိုတွဲဖက်ပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: Anthropologie headband (ဒေါ်လာ ၂၄)၊ La Vie စတိုင်အိမ်အကျီ (ဒေါ်လာ ၇၅၀)၊ မြေများ '' အဆုံး turtleneck (ဒေါ်လာ ၃၀;$ 21); ဂျင်းဘောင်းဘီစကားလုံး (ဒေါ်လာ ၉၀)၊ Margaux ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၂၁၈)
26. တောက်ပသောအဖြူရောင်အပိုင်းအစတစ်ခုကိုစမ်းကြည့်ပါ ဦး
ဆောင်းရာသီတစ်လျှောက်လုံးတွင်အဖြူရောင်အရိပ်အမြွက်နှင့်အနက်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်များသာဝတ်ဆင်လိုသည်မှာကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက်ပြင်းထန်သည်။ သို့သော်တောက်ပသောအဖြူရောင်တစ်ခုကိုအနက်ရောင်နှင့်မီးခိုးရောင်ပုံနှိပ်ခြင်းများထဲသို့ပစ်လိုက်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏အဝတ်အစားသည်ရိုးရိုးလေးနှင့်နွေ ဦး ရာသီအတွက်ပိုမိုသင့်တော်သည်ဟုခံစားရသည် (သင်ကပန်းပွင့်များကိုထွက်ထုတ်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသော်လည်း) ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: လမ်းကုတ်အင်္ကျီ ($ 325); LOFT blazer (ဒေါ်လာ ၁၄၀)၊ ရေဗက္ကာတေလာအင်္ကျီ ($ 225;$ 90); Sanctuary ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၈၉;$ 44); Manolo Blahnik ဒေါက် (ဒေါ်လာ ၆၆၅)
Coterie အသင်း ၀ င် Alyssa Amoroso မှဒီတစ်နေ့တာမှညဥ့်နက်တဲ့အမြင့်ဆုံးဟာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပျူငှါနွေးထွေးသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု၊ (အပိုဆု - နောက်လာမည့်နေ့စွဲအတွက် Zoom ကိုအလွန်ကြည့်ကောင်းလိမ့်မည်။ )
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: လိုင်း & Dot ဆွယ်တာအင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၆၉)၊ ရေဗက္ကာတေလာဘောင်းဘီ ($ 375); Ted Baker London အိတ် ($ ၂၈၉)၊ Marni ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၆၅၀)
သင်အမြဲတမ်းရှာဖွေနေသည့်တူညီသောတီရှပ်၊ ရည်းစားဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်သားရေ moto များကိုအားကစားလုပ်မည့်အစားကျယ်ပြန့်သောခြေထောက်သို့မဟုတ်ဘွတ်ဖိနပ်ဂျင်းဘောင်းဘီနှင့်သားရေတုတ်ကျင်းများကဲ့သို့အသစ်သော silhouette များဖြင့်အရာရာကိုလှုပ်ခါလိုက်သည်။ (P.S. အချို့ထည့်ပါ ပုလဲလက်ဝတ်ရတနာ နှင့်က ကြေညာချက် headband ပို။ ပင်ဝတ်ဆင်ခံစားရရန်ရောနှောရန်။ )
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ကွက်လပ် NYC တုတ်ကျင်းကုတ်အင်္ကျီ ($ 148;$ 104); Junk Food တီရှပ် (ဒေါ်လာ ၄၄)၊ Lee ဂျင်းဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၉၈)၊ ASOS ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၁၄)
၂၉။ MAXI-LENGTH CARDIGAN အတွက်သင့်အင်္ကျီကိုလဲပါ
ကလေးကိုခလုတ်၊ ခါးပတ်ထည့်ပါ။ ပြီးတော့အဲဒီမှာသင်သွား! သင်တစ် ဦး Dime မဖြုန်းဘဲအသစ်တစ်ခုပျူငှါနွေးထွေးသောဂျာကင်အင်္ကျီရှိသည်ကဲ့သို့ဒါဟာ - ပါပဲ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: အဆိုပါ Cardigan အေဂျင်စီ ($ 350;$ 175); Clinch ခါးပတ်ခါးပတ် ($ 237); Susana မိုနာကိုစားဆင်ယင် (ဒေါ်လာ ၁၉၈)၊ Alona လည်ဆွဲ (ဒေါ်လာ ၁၉၀)၊ Midnight လည်ဆွဲအတိတ် (ဒေါ်လာ ၉၈)၊ Paolo ဒေါက်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၄၀)
Kirstin Sinclair / getty ပုံရိပ်တွေ
ဒါဟာနံနက်ယံ၌ 70 ဒီဂရီနှင့်နေသာဖြစ်နိုင်သည်, 45 ​​နှင့်2p.m. အားဖြင့်ရွာသွန်း ချိန်ညှိနိုင်သည့်အလွှာများသည်ဤဆူညံနေသောအချိန်ကာလအားဖြင့်၎င်းကိုပြုလုပ်ရန်သော့ချက်ဖြစ်သည်။ ချွေးထွက်ရှပ်အင်္ကျီသည်သင်၏ခါးပတ်ပတ်လည်တွင်အလွန်နီးကပ်နေသည်။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ချန်ပီယံချွေးထွက်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၅၀;$ 40); အမှတ်တံဆိပ်စားဆင်ယင် Faithfull ($ 209); AllSaints အိတ် ($ 298); Marc Fisher, LTD ဘွတ်ဖိနပ် (ဒေါ်လာ ၁၉၉)
Converse Sneaker ၏ဒုတိယသမ္မတ Kamala Harris က၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်ပုံရသည် စျေးဝယ်အများကြီးဖှယျ သူမ၏ (အဆင်ပြေ) ခြေရာကိုလိုက်လျှောက်ရန်။ သူမ၏ဂန္ထဝင် Sneaker ၏ combo နှင့်အနည်းငယ်သောအပိုဆောင်း oomph ဖြင့်သင်၏နေ့ကိုဖုံးလွှမ်းရန်ဝတ်စုံကိုစမ်းကြည့်ပါ။
အလားတူစတိုင်များစျေးဝယ်: ASOS blazer ($ 74) နှင့် ဘောင်းဘီ (ဒေါ်လာ ၄၆)၊ Everlane တီရှပ် (ဒေါ်လာ ၁၈)၊ စကားစမြည်ပြော (ဒေါ်လာ ၅၀)
သက်ဆိုင်သော: 61 မျက်နှာပြင်မျက်နှာဖုံးများပါ ၀ င်ပြီးစတိုင်ကျ။ လွယ်ကူစွာ ၀ တ်ဆင်နိုင်ပြီးသင်္ဘောသို့အဆင်သင့်ဖြစ်ခြင်း
Categories #actagainstabuse Gynaec စိတ်ဖိစီးမှု၏
ဘွဲ့ရာသီ 22 ဇာတ်လမ်းတွဲ 1
သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုလွှတ်ရမလဲ
အစဉ်အဆက်အများဆုံးရင်ခုန်စရာ hollywood ရုပ်ရှင်